डा.केसीलाई काठमाडौं लैजाने सरकारको प्रयास असफल - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ डा.केसीलाई काठमाडौं लैजाने सरकारको प्रयास असफल
डा.केसीलाई काठमाडौं लैजाने सरकारको प्रयास असफल
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ कात्तिक २५ गते, १८:१० मा प्रकाशित
धनगढी—डडेल्धुरा सदरमुकामबाट १७ औं पटकको सत्याग्रह थालेका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता प्रा.डा.गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने प्रयास असफल भएको छ । सोमबार डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन डडेल्धुरा हेलिकप्टर पठाइएको थियो ।
डा. केसीले जान नमानेपछि हेलिकप्टर रित्तै काठमाडौं फर्किएको छ । डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गएको भन्दै सरकारले उनलाई काठमाडौं ल्याउन सोमबार हेलिकप्टर पठाएको थियो । तर, स्थानीयको अवरोध तथा डा. केसी स्वयंमले माग पूरा नभएर काठमाडौं नजाने अडान कसेपछि काठमाडौं ल्याउने प्रयास असफल भएको हो ।
अस्पतालका निमित्त मेसु डा.जितेन्द्र कँडेलले डा.केसीको उपचार डडेल्धुरा अस्पतालको समर्थताभन्दा बाहिर रहेकाले सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । डा.केसीले थालेको अनसनमा डडेल्धुराका नागरिक संघ संस्थाहरुको ऐक्यबद्धतासहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
डा.केसीको मुटु, प्रेशर, सुगर बढिरहेको र अवस्था निकै क्रिटिकल भएकाले रिफर गर्नु अति आवश्यक रहेको डा.कँडेलले बताए । आन्दोलन र अनसनका मागहरु जायज भएपनि जीवन रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व भएको भन्दै उनले आफूहरुसँग आईसीयु, अत्याधुनिक उपचार उपकरण नभएको स्पष्ट पारे ।
डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नतीसहित दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पूर्ति गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेज स्थापनासहित ७ बुँदे माग राख्दै अनसनमा बसेका डा.केसीको आज अनसनको आठौं दिन हो । डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि काठमाडौ रिफर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
डा.केसीलाई लैजान सेनाको हेलिकप्टर डडेल्धुराको दह ब्यारेकमा बिहानै देखि अवतरण भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदैं गएका कारण उनको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नु पहिलो कर्तब्य हो ।’